शब्दकोश: बुद्ध जयन्तीमा बिचरा बुद्ध
मे २० तारिख (जेठ ७) बुद्ध जयन्तीको दिन सहरको रमझममा मिसिने कसोकसो चिठ्ठा परेको थियो । मेघको भारी गर्जन नबोकेरै वर्षा ठमठम अहिल्यै झरुँलाझैँ गरिरहेको अपराह्‍न थियो । नयाँ सडकछेउको इन्द्रचोक हुँदै बौद्ध धर्मावलम्बी तथा अन्य मानिसहरूको झुन्ड ध्वजा-पताका आकाशमा नचाउँदै बुद्धको प्रतिमालाई गोलाकारमा घेरेर वसन्तपुरको गल्ली छिचोल्दै थियो ।
बुद्ध अहिले पनि जनजनभित्र जन्मिरहेछन् रे ।
बुद्ध मूर्तिपूजाको घोर विरोधी रे ।
बुद्ध वचनमा बाँच्छन् रे ।
अरु पनि के-के रे ...।
यस्ता भौतिक-अध्यात्मिक कुरो सुनिन्छन्, आमाको पूजाकोठामा अथवा काका-हजुरबाको चिया गफमा । अरु जेसुकै होस्, बुद्ध जयन्तीको एक दिन संसारमा लुम्बिनी सिङ्गो चुम्बक बनेर केन्द्रमा रहन्छ । मूर्तिपूजाको विरोधी बुद्धको मूर्ति आज हेर्ने हो भने आँखा थाकेर लोलाउन थाल्छन् । बुद्ध आज क्यूरियो पसल-पसलमा व्यापारिक ट्याग बोकेर टुसुक्क बसेका छन् । स्वयम्भू थुम्कोलाई रखवारी गर्नझैँ बुद्ध त्यसैको तल आँगनीमा भीमकाय स्वरुपमा खडा छँदै छन् । 'अहिले जन्मिएका भए बुद्धले पनि बन्दुक बोक्थे रे', नारायणको पल्पसा क्याफे उपन्यासमा पढ्दा खूब चित्त बुझेथ्यो ।
सबैतिर छन् बुद्ध ।
- उपहारमा बुद्ध ।
- कोसेलीमा बुद्ध ।
- पूजाकोठामा बुद्ध ।
- मोडेल गर्लसँगै भित्तामा बुद्ध ।
- घाँटीमै टाँसिएका 'लकेट बुद्ध' ।
तर के, बुद्ध आत्मामा छन् ?
मनमा कसैले राखेको छ त बुद्धलाई ?
आत्मामा त्यति 'स्पेस' छ राख्‍नलाई ?
मान्छेभित्र नअटाउने भव्य बुद्ध ।
बिचरा बुद्ध !
मे २१, २००८ (नक्साल)